သုခုမနန်းတော်: ဘုရားလေးငယ်ငယ် ထူးခြားတယ်
ရေးသားသူ သုခုမလေဒီ 08 December 2008 အမျိုးအစား ဗုဒ္ဓဆိုင်ရာ
သည်ဘုရားပင့်ရခြင်း အကြောင်းစတင်ပြောရရင်၊ ကျွန်မ ညီမအကြောင်း စပြောရမှာပဲ၊ သူနဲ့ ကျွန်မက အထက်အောက် ညီမပေါ့။ သူ က လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ကျော်ကျော်(လပေါင်း၂၀) လောက်က အနောက်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံကို ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။
ပထမတော့ အစ်မ၀မ်းကွဲကခေါ်တာဆိုတော့ အစ်မအိမ်မှာအတူနေတယ်ပေါ့။ နောက်ပိုင်း သူဖာသာကြိုးစား အလုပ်လုပ်ချင်တာကတစ်ကြောင်း၊ အမနဲ့ အဆင်မပြေတော့တာက တစ်ကြောင်းကြောင့်၊ သူတစ်ယောက် တည်း နေထိုင်နိုင်အောင် လုပ်ကိုင်ရပါတယ်။
သူရောက်တဲ့နိုင်ငံက မြန်မာလူမျိုးလည်း အင်မတန်နည်းပါတယ်။ အသိမိတ်ဆွေဆိုလို့ သူ့မှာ ရင်းရင်း နှီးနှီးနဲ့ ကူညီမယ့်သူ တစ်ယောက်မှမရှိတဲ့အချိန်၊ သူ့အတွက် တော်တော်လေး ဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ် လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အမ ၀မ်းကွဲပေးတဲ့မုန့်ဖိုး ပိုက်ဆံလေးနဲ့ ဟိုယောင် ယောင် ဒီယောင်ယောင်ဖြစ်နေခဲ့ပြီး၊ အဲဒီနိုင်ငံရဲ့ ဘာသာစကားကလည်း ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် မတတ်တာကြောင့် ဒုက္ခများစွာကိုကြုံနေခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်မတို့ကလည်း အဝေးကနေရတာကြောင့် ဘာကိုမှ အသေအချာမကူညီနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ တတ်နိုင်သလောက်တော့ ကိုယ်သိရာ၊ ခင်ရာသူတွေ ဆက်ပေးခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့်၊ သူရောက်နေတဲ့နိုင်ငံမှာက အသိမိတ်ဆွေ မရှိကြ ပါဘူး။
ကျွန်မအမေကတော့ ထုံးစံအတိုင်း သူ့အတွက် ဗေဒင်တွေမေး၊ ယတြာချေပေး၊ သက်သတ်လွတ် စားပေးရတာနဲ့ လျှောက်လုပ်ပါတော့တယ်။ မိခင်ဆိုတော့လည်း ဟုတ်တာမဟုတ်တာ အပထား လုပ် ပေးနိုင်တာတွေ အကုန်လျှောက်လုပ်ပေးတော့တာပေါ့။ အဲဒီကာလ အတောအတွင်း မှာပါပဲ၊ ကျွန်မ အစ်မ တစ်ယောက်ရဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူအိမ်မှာ ဘုရားတစ်ဆူပင့်တာ လှမ်းဖိတ် လို့ သွားရောက်ဖူးမျှော်ခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားက ထူးထူးဆန်းဆန်း နဲ့ပုံတော်ကသေးသေးလေးပါ။ `လေးကျွန်းတစ်မြင့်မိုရ် စကြာင်္ရှင်` ရုပ်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား လို့ ဘွဲ့တော်ပေးထားပါတယ်။
ဘုရားရဲ့ ရာဇ၀င်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ၁၉၆၅ ခု ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ တရုတ် နိုင်ငံနယ်စပ်တစ်နေရာမှာ အစိုးရတပ်နဲ့ သောင်းကျန်းသူတို့ တိုက်ပွဲဖြစ်လေရာ ပေ၅၀၀၀ ခန့် မြင့်သောတောင်ကုန်း တစ်ကုန်းကို တပ်မတော်ကသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ထိုတောင် ကုန်းပေါ်မှာ အရိယာသူတော်စင်များသီတင်းသုံးနေသော တောကျောင်းကလေး တစ်ကျောင်းကို တွေ့ရပါတယ်။ တိုက်ပွဲအပြီး တပ်မတော်သားများ ကျောင်းပေါ်သို့ တက်ရောက်ခဲ့ရာ ကျောင်းပေါ်မှာ လူတစ်ဦး တစ်ယောက်မှ မတွေ့ရပဲ၊ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များနဲ့ အငွေ့ တစ်ထောင်း ထောင်း ထနေသော ကောက်ညှင်းပေါင်းတစ်ပန်းကန် ကိုသာထူးဆန်းစွာတွေ့ ရတယ်လို့သိရ ပြန်ပါတယ်။
အောင်ပွဲရတပ်မတော်သားများက ထိုကျောင်းဘေးတွင်၃ ညတာစခန်းချကြပါတယ်။ ပထမရက်မှာ ရှမ်းလိုလို၊ ကချင်လိုလို အနက်ရောင်ဝတ်ဆင်ထားသော အမျိုးသမီး၆ဦး ကျောင်းပေါ်သို့တက်၍ ဘုရားပန်းလဲခြင်း၊ ဘုရားဝတ်ပြုခြင်းတို့ကို တပ်ကြပ်ကြီး ဆရာ တင်မြင့်က တွေ့ ရှိလိုက်ပါတယ်။ ထို့နောက် ၄င်းအမျိုးသမီးများနောက်သို့ နောက်ယောင်ခံ လိုက်ကြည့်ရာ တောတန်းအလွန်၌ အားလုံးပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ ထိုညမှာပဲ ဆရာ တင်မြင့်အား ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်အား ပင့်ဆောင်ရန် အိမ်မက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယနေ့နံနက်မှာ အိမ်မက်အကြောင်း အရာရှိအားပြောပြပေမယ့်၊ အရာရှိက ကျောင်းပေါ် ကဘုရားများကို မယူဆောင်ရန် အမိန့်ရှိပါတယ်။ ဆရာတင်မြင့်ကိုယ်တိုင်ကလည်း များပြား သော ဘုရားများမှ မည်သည့် ဘုရားကိုပင့်ဆောင်ရမည် မသိဖြစ်နေပါတယ်။ ထိုညမှာတော့ ပင့်ဆောင်သွားရမည့်ဘုရားမှာ ရွှေရောင်တစ်ဝင်းဝင်းနှင့် ပုတီးတစ်ကုန်းချိတ်ထားသော ကျောင်းတိုင်တစ်လုံးအတွင်း၌ ကိန်းဝပ်စံပယ်နေသည့် ဘုရားဖြစ်ကြောင်း အိမ်မက် ဆက်၍ ပေးပါတယ်။
ထို့ကြောင့် တတိယနေ့တွင် ဆရာတင်မြင့်က အရာရှိသို့ ထပ်မံတင်ပြရာမှ ပူဇော်စေချင်လို့ အိမ်မက်၂ခါ ပေးတာဖြစ်မည်ဟုဆိုကာ အိမ်မက်အတိုင်း မှန်ပါကပင့်ဆောင်ပါဟု ခွင့်ပြုခဲ့ ပါတော့တယ်။ ထို့နောက် ဆရာတင်မြင့်အိမ်မက်ထဲက တွေ့ရသော ကျောင်းတိုင်အား သေနတ်လှံစွပ်ဦးဖြင့် ကလန့်၍ ဖွင့်လိုက်ရာ ယခုတွေ့ရသော ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တစ်ဆူနှင့် ရှမ်းဘာသာဖြင့် ရေးထားသော ပုရပိုဒ်တစ်ခုကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရှမ်းဘာသာတတ် ကျွမ်းသူ အား ပုရပိုဒ်ကိုဖတ်ခိုင်းကြည့်ရာ ဤရုပ်ပွားတော်မြတ်သည် အလွန်တန်ခိုးကြီးကြောင်း၊ ဤဘုရားအား ရေသပ္ပါယ်ပြီး ရေကိုသောက်သုံးခြင်းဖြင့် ရောဂါဝေဒနာများ ပျောက်ကင်း ကြောင်း၊ အန္တရာယ်ကင်းနိုင်ကြောင်းနှင့် ဤဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်အား ရဟန္တာတစ်ပါး၊ ဆံရှည် ရသေ့တစ်ပါး၊ ပိတ်ဖြူဝတ်လေးကျွန်းစကြာင်္ ၀ိဇ္ဇာလေးပါးမှ တစ်ပါး စောင့်ရှောက်ကြောင်း စသည်တို့ သိရပါတယ်။
တပ်ကြပ်ကြီးတင်မြင့်က ဘုရားကိုပင့်ဆောင်လာပြီး မိဘများထံကိုးကွယ်စေရာ၊ မိမိအိမ်သို့ ပင့်ဆောင်ကိုးကွယ်ပါဟု အိမ်မက်ပေးပြန်ပါတယ်။ အိမ်သို့ ပင့်ဆောင်ပူဇော်စဉ် ဆရာတစ်ဦးမှ မိမိအား ကိုးကွယ်ခွင့်ပြုပါဟုဆိုသဖြင့် ယာယီပူဇော်ခွင့်ပြုကာ၊ ၇ရက်အကြာမှာ ဘုရားအား မူလဒကာသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရန်၊ တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းကိုးကွယ်ရန်မဟုတ်၊ ၇ရက် သားသမီး များကိုးကွယ်ရန် အိမ်မက်ပေးသဖြင့် ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရပြန်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် မူလဒကာ တပ်ကြပ်ကြီးဦးတင်မြင့်အိမ်မှာပဲ ယာယီကိန်းဝပ် စံပယ်၍ ၇ရက်သားသမီး အိမ်များ သို့ ဒေသစာရီကြွချီလျှက်ရှိပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ယခုတော့ တပ်ကြပ်ကြီး ဦးတင်မြင့်ဆိုသူမှာ ရဟန်းဘ၀သို့ ကူးပြောင်းရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး၊ သထုံမြို့ ( ) တောင်ပေါ် မှာပဲသီတင်းသုံးကာ၊ နေထိုင်ပါတော့တယ်။ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကိုကား ယုံကြည်ရသူ ဒကာမ တစ်ဦးထံအပ်နှံကာ ၇ရက်သားသမီးများကို လှည့်လည် အပူဇော်ခံစေပါတယ်။
ကျွန်မ ထိုဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကို သွားရောက်ဖူးမျှော်ဖြစ်တော့ ညီမဖြစ်သူ အတွက်ဓိဌာန်ပြီး ဆုတောင်းမိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မ ညီမအဆင်ပြေပြေနေထိုင်နိုင်ပါက ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်အား ပင့်ဆောင်ပူဇော်နိုင်ရပါလို၏။ ကျွန်မသည်လို ဆုတောင်းပြီး ဓိဌာန်ခဲ့ပါတယ်။ အသားများ၊ အသွေးများ စားသောက်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပြီး၊ နေ့နံအလိုက် ဘုရားရှိခိုးနည်းကို ၁၀၈ခေါက် ရွတ်ရပါတယ်။
တစ်နေ့ သုံးကြိမ် ရွတ်ဆိုပွားများရပါတယ်။ မနက်အိပ်ယာထ တစ်ကြိမ်၊ နေ့လည် မွန်းတည့်ချိန် တစ်ကြိမ် နဲ့ ညအိပ်ယာဝင်ချိန် တစ်ကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားဖူးပြီးနောက် လစဉ်တိုင်း ကျွန်မ ဓိဌာန်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆုကတော့ ကျွန်မဓိဌာန်ထားတဲ့ ဆုတစ်ဆုကိုပဲတောင်းဆိုပါတယ်။ အဲဒီအတောအတွင်းမှာတော့ ကျွန်မ ညီမဆီကဆက်သွယ်လာမှုကိုပဲ နားစွင့်ခဲ့ရတာပေါ့။ ကျွန်မရဲ့ညီမ အဆင်ပြေပါ့မလား ဆိုတာကိုပဲ မျှော်လင့်စောင့်စားနေရပါတယ်။ သူနေတဲ့ နိုင်ငံကလည်း လူတိုင်းကွန်ပျူတာကိုယ်စီရှိကြတဲ့ သူဌေးနိုင်ငံ ဆိုတော့ ကွန်ပျူတာမရှိတဲ့ သူ့မှာ မေးလ်ပို့ဖို့တောင် စာကြည့်တိုက်ကို သွားရပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ တစ်လကနေတစ်လ အင်တာဗျူးတွေဖြေဆိုကာ နောက်ဆုံးအဆင့်အထိ အောင်မြင်မှု ရသွားခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ကြိုးစားမှုလည်းပါပါတယ်။ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ဓိဌာန်လို့ ရတယ် မဆိုလိုပါဘူး။ သို့ ပေမယ့် ထူးခြားတာတော့ ထူးခြားပါတယ်။ အဲဒီနောက် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကို ဆုတောင်းပြီး လျှောက်ထားကာ ဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံကလည်းထူးခြားပါတယ်။ သုံးပုံ ရိုက်တာမှာ တစ်ပုံကိုတစ်မျိုးစီ ထူးခြားစွာမြင်တွေ့ရပါတယ်။ တစ်ပုံက ညာဖက် မျက်လုံးတော် ပွင့််ခြင်း၊ ဒုတိယပုံက ရောင်ခြည်တော်ကွန့် မြူးခြင်းနဲ့ တတိယပုံတော်ကတော့ ရုပ်ပွားတော်ရဲ့ ရင်ဘတ်တော်မှာ ၀တ်ဖြူစင်ပုဂ္ဂိုလ် တည်ရှိနေခြင်းတို့ပါပဲ။ ကျွန်မ ညီမကိုရည်စူးတာကြောင့်၊ သူ့ ရဲ့မွေးနေ့ ဒီဇင်ဘာ၁၀ ရက်နေ့ ကိုပဲရွေးချယ်ကာ ပင့်ဆောင်ပူဇော် လိုက်ပါတယ်။
(၁) ရုပ်ပွားတော်သည် မျက်လွှာချ၍လည်းကောင်း၊ မျက်လုံးတော်ဖွင့်၍လည်းကောင်း၊
ပြုံး၍လည်းကောင်းအကြည်ညိုခံကာ တစ်ခါတစ်ရံ ရယ်၍အပူဇော် ခံခြင်း
(၂) ရုပ်ပွားတော်အား အာရုံပြုနေသူများသည် တစ်ခါတစ်ရံ တစ်ဆူမှနှစ်ဆူ၊ နှစ်ဆူမှ သုံးဆူပွား၍ ဖူးတွေ့ ရခြင်း(၃) ဓါတ်ပုံရိုက်မှတ်တမ်းတင်ရာတွင် ရိုက်ကူးသူ၏ယုံကြည်မှုအပေါ် ပုံမထင်ရှားခြင်း၊ မျက်နှာတော်မပေါ်ခြင်း၊ ထူးခြားသော ဓိဌာန်သူများအတွက် အံ့သြထူး ခြားသောပုံတော်များရခြင်း
(၄) ရုပ်ပွားတော်၏ယာဖက်လက်သန်းတော်၊ နှာဖျားတော်၊ ဦးခေါင်းတော်တို့ အား၊ ရွှေသင်္ကန်းကပ်လှူ၍မရခြင်း
(၅) မသန့် ပြန့် သော အတိုက်အခိုက်ရှိသောအိမ်များသို့ ပင့်ဆောင်ပါက ရုပ်ပွားတော်မြတ်လည်သွားခြင်း၊ ကျောခိုင်းတတ်ခြင်း
(၆) ရောင်ခြည်တော်ကွန့် မြူးခြင်း၊ ကိုယ်လုံးတော်ဝယ် နီသော၊ ၀ါသော၊ စိမ်းသောရောင်ခြည်များ ဖူးတွေ့ ရခြင်း
(၇) သောက်တော်ရေ နှင့် အချိုရည်များကပ်လှူရာတွင် ဆူပွက်လာခြင်း။ ချိုးရေတော်ကို ဓိဌာန်ပြုကာသောက်သုံးပါက ရောဂါမျိုးစုံပျောက်ကင်းခြင်း
(၈) ရုပ်ပွားတော်အား ပုဂ္ဂိုလ်ထူး ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်များလာရောက်ဖူးမြှော်ခြင်း
(၉) ရုပ်ပွားတော်အား ဓိဌာန်ပြု ဆုတောင်းလုပ်ကိုင်ကြသော လောကီကိစ္စအများစု ပြည့်ဝခြင်း တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်အား ယုံကြည်စွာကိုးကွယ်သူ တို့ အား အထက်ပါအံ့ဖွယ်ကိုးပါး မှတစ်ပါးပါး ကိုတော့ ထူးထူးခြားခြား မြင်တွေ့ နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့၊ ထိုဘုရားရဲ့ ဆောင်ပုဒ်လေးပါ။
ကပ်ကျော် လာဘ်ခေါ်ထူးတာမို့ 
မှတ်ချက်။ ။ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များကိုလည်း သက်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားကဲ့သို့ ဖူးမြော်ပြီး မိမိတို့လုပ်အပ်သည့် ကိစ္စတို့ကို လည်း လုပ်ကိုင်မှသာ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမှာပါ။
sister,,where can i go & see this buddha status?? i want to make (adate htan) for my dad's health.
pls. drop me email about information
April ရေ .. ခုလောလောဆယ်တော့ ဘုရားကဒေသစာရီကြွနေပါတယ်။ ၀ါတွင်းသုံးလပြည့်ပြီးရင်ပြန်ကြွလာပါလိမ့်မယ်။ ဓိဌာန်ချင်ရင်တော့ ပုံတော်ကိုအာရုံပြုပြီးကိုယ့်နေ့ နံအလိုက်ရွတ်ဆိုကာ အဓိဌာန်ပြုနည်းနဲ့ ဓိဌာန်လို့ ရပါတယ်။ သိချင်တာရှိရင်တော့ မေလ်းကနေဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ mystorys1001@gmail.com ပါ။ April အဖေလည်းအမြန်ကျမ်းမာပါစေ။